War deg deg ah Akhriso Ogow Tirada lacagta ay Xildhibaanada Galmudug ka heleen Doorashada maanta dhaceysa - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG War deg deg ah Akhriso Ogow Tirada lacagta ay Xildhibaanada Galmudug ka...
War deg deg ah Akhriso Ogow Tirada lacagta ay Xildhibaanada Galmudug ka heleen Doorashada maanta dhaceysa
Wararka aan ka heleyno magaalada Dhuusomareeb ayaa sheegaya in Xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug xalay aysan hurdo ladin, waxa ayna Xildhibaanada xalay oo dhan ku jireen sidii ay lacago uga sameyn lahaayeen doorashada maanta dhaceysa.
Sida aan xogta ku heleyno xildhibaan walbo oo katirsan Baarlamaanka Galmudug ayaa xalay helay lacag ka badan 30-kun oo Dollar, waxaana 20-kun oo kamid ah lacagtaasi ka qaateen Musharax Madaxweyne halka lacago kala duwana ka qaateen qaar kamid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweyne kuxigeenka.
Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha Galmudug ayaa sadex kamid ah la sheegay in xalay aysan ku jirin wax olole ah ayna iska hurdayeen, waxaana xalay shaqada ka socotay mid kamid ah guryaha uu degan yahay musharaxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha.
Doorashada Madaxweynaha Galmudug ayaa hada lasii ogyahay musharaxa kusoo bixi doona, waxaana wali la saadaalin karin musharaxa ku guuleesan doona xilka Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ay ku tartamayaan 5-musharax oo kala duwan.
Magaalada Dhuusomareeb ayaan xalay laga seexan, waxaana siyaasiyiinta ku sugan iyo Xldhibaanada xalay si weyn uga shaqeenayeen olalaha doorashada la filayo in saacadaha soo aadan ka dhacdo magaalada Dhuusomareeb.
Doorashada oo markii hore la filayay in ay ka dhacdo hool ku dhax yaala xarunta shiirkole ayaa la sheegay in laga bedelay, waxaana doorashada lagu qabanaa hool kale oo kuyaala xarunta gobolka oo hada ah Madaxtooyada KMG ee Galmudug.
Previous articleAkhriso:-Ahmed shire falagle musharaxa ugu cad cad doorashada galmudug iyo Shirarka ka socda hoygiisa dhuusamareeb
Next articleWar deg deg ah Ciidamada AMISOM iyo dowlada oo la wareegay xarumo ku yaal dhuusamareeb mxaa soo kordhay ?